Guutummaa Oromiyaa Keessatti Fincilli Xumura Garbummaa Adeemaa Jira. | QEERROO
Guutummaa Oromiyaa Keessatti Fincilli Xumura Garbummaa Adeemaa Jira.
Posted on November 14, 2017 by Qeerroo
Oromiyaa keessatti fincilli Xumura garbummaa kan uummata Oromoo Guutummaa makate finiinaa jira. Fincila amma adeemaa jiruun Wayyaaneen kiyyoo keessaa bahuu hindandeenye ta’aa jira. Gaaffiin mirgaa karaa nagaa uummataan gaafatamaa kan jiru yoo ta’u, Qawweef meeshaawwan waraanaan doorsifni Wayyaaneen gootus ittuu jabaatee adeemaa jira. Haa ta’uutii qawween Wayyaanee gaaffii haqaaf gaaffii mirgaa gaafachuurraa uummata dhaabaa kan hinjirre ta’uu uummatni waloon bahee fincila inni taasisaa jiru ragaadha.
Tooruma kanaan mooraa Yuunibarsiitilee kanneen akka, Yuunibarsiitii Haroo Maayaa, Yuunibarsiitii Bulee Horaa, Yuunibarsiitii Mattuu,
Yuunibarsiitii Jimmaa, Yuunibarsiitii Amboo fi kkf keessatti FXG barattootaan dhoofamee jira. Gaaffiin barattootaa muraasatuun deebi’uun Fincilarra duubatti akka hindeebifnes dhaamaa jiru.
Gaaffiiwwan barattootaan barattoota Jijjigaaf ramaddii laachuun mootummaa beekamaadha. Ta’us gaaffiiwwan gaafatamaa turan danuun
deebii argachuurra rasaasaan dhaanamuun dabalaa adeemaa jira. Keessattuu
1, Waraanni maqaa Liyyuu Ayilii maxxanfatee deemu uummata Oromoo 603,933 (kuma dhibba ja’aaf, kuma sadiif dhibba sagaliif soddomii
sadii) ardaaf qabeenyaa isaanirraa buqqaasee, maatiiwaan Oromoo joortuuf kadhattuu taasisaa jira. Gocha daguuggaa raawwataa jiruun
ilmaan Oromoo tilmaaman 2000 (kuma lama ta’an) ajjeeseera. Ajjeechaan human Liyyuu Ayilii mootummaa Wayyaaneen bobbaafamee kun ittuu uummata waraanuurraa duubatti jechaa kan hinjirre yoo ta’u, ilmaan Oromoo irraa Qawween Wayyaanee rasaasni Wayyaanee haa dhaabbatu jechuun gaaffiin karaa nagaa itti fufee jira.
2, Barattoota Oromoo baraa 2014 keessa saamicha lafaa Oromiyaaf falmaa turan gaaffiin isaanii gaaffii haqaa ta’uu afaan Wayyaaneerraas
dhagaa’amaa jira. Gaaffiin barattoota sanneenii gaaffii haqaa erga ta’e, kanneen ilmaan Oromoo ajjeesaa turan seeratti dhiyaachuu qabu.
Kanneen barnootaarraa ugguramanii badii tokko malee barnootarraa ari’ataman mooraawwan Mara irraa barattoota 5 hanga 6 waan ta’aniif
isaan kun hatattamaan mana barumsaatti debi’uu qabu. Barattoonni gaaffii haqaa gaafatanii hidhaman hatattamaan mana hidhaa Wayyaaneetii
hiikamuu qabu. Artistoonni, Abbootiin Siyyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee mana hiraarsaa Wayyaaneetii baafamuu qabu.
3, Yakkaawwan qaama mootummaan afaan Qawween uummata doorsisanii raawwatamaa, yakka Gudeeddii Shamaraaf Dubartii, yakka saamichaa,
yakka ajjeechaa suukaneessaa hattataamaan Oromoof saboota Cunqurfamoo impaayera biyyattii irraa dhabbachuu qaba
4, Mootummaan ce’umsaa nageenya biyyatti eegsisu kan adda Bilisummaa Oromoo makate hatattamaan Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qaba. Nageenya biyyatti afaan Qawween aangaa’ota Wayyaanee booressan Martuuu seeratti dhiiyaachuu qabu.
Jechuun gaaffiiwwan kanneen gaafachuun itti fufee jira. Derbiin gaaffilee kanneen hanga deebi’utti fincilli uummata kan hindhaabbnne
ta’uu gamanumaan dhaamna.
1 thought on “Guutummaa Oromiyaa Keessatti Fincilli Xumura Garbummaa Adeemaa Jira.”
TSEGAYE MEKONEN SONESA on November 14, 2017 at 1:40 pm said:
Godina Wallaga lixaa Sanaa noolee kaabbaatti FXG haala gaariin itti fufee jira.aanichatti qeerroin mana wayyaanee gubee ariee Akka Oromiyaan dhuunfaa oromoo tauuf warra oromoo saamanis of keessaa balleessina jechuun konkolaataa wayyaanotaa FI Moter biskiliittii isaaniis gubee dhaadannoo guddatte oolee jira.